ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: နွေဦးရာသီ Clamp ယောဘကိုချိန်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kayaş Kayseri မီးရထားဂီယာလိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး4ပမာဏစွမ်းအင်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူပျထှေးသောအကြားတွင်တွေ့ရှိ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Diyarbakir-Kurtalan လိုင်းလမ်းမကြီးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး »
နွေဦး Clamp တစ်ဦးက Business ဝယ်ယူ
က) အမည်: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏ဘိန်းကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံညွှန်ကြားမှု။
f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: အာဒိုဂန် MUTLU- TCDD ။ ကွန်ကရစ် Trve ။ bookmarking ။ Grp ။
1.2 ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာအဆက်အသွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စပ်လျဉ်းနုသတင်းအချက်အလက်အတွက်လေလံ
က) အမည်: နွေဦးရာသီ Clamp အလုပ်စုဆောင်းမှု။
ခ) IRB အမှတ် 2019 / 428858 မှတ်တမ်းတင်
ဂ) ပမာဏနှင့်အမျိုးအစား: 80.000 အပိုင်းပိုင်းနွေ Clamp
ဂ) တင်ဒါနေ့စွဲ: 19 / 09 / 2019
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တင်ဒါ၏ 3.000.000 Piece HM နွေဦး-type အမျိုးအစားညှပ် 01 / 10 / 2012 ဗဟိုကုန်စည်တင်ဒါကိုယျစားလှယျဌာနနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူကော်မရှင်နူးညံ့သောကိုယျစားလှယျGÜLHANÇAVUŞOĞLUဖုန်းနှင့် NO0312 309 05 15 / 4129-43990312 311 53 05 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 27 / 09 / 2012 နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲနှင့်အချိန် 12 / 11 / 2012 တွင် TIME ဖက်စ်: 14: 00 SPECIFICATION, PRICE 300 - လေလံနှုန်းလေလံအကြောင်းအရာပစ္စည်းများ RECOVERY FILE ကို NUMBER ကိုနူးညံ့ 2012 / 132831 အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ADDRESS ကို malzemesiparis@tcdd.gov.t Gripperlines ဝယ်ယူသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 3.000.000 အရေအတွက် HMI ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် oN နွေဦး-type အမျိုးအစားညှပ်ဧည့်ခံအမှတ် 4734 19 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးဥပဒေပုဒ်မအရသိရသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပမာဏနွေ Clamp ဝယ်ယူခြင်းကို 200.000 19 / 11 / 2012 TC STATE ရထားလမ်းလေလံ 200.000 ယူနစ်တာဝန်ရှိနွေ Clamp xnumx.bölgကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်-ဆာလောင်မွတ်သိပ်နူးညံ့-ထောက်ပံ့ရေးတင်ဒါဝယ်ယူလိမ့်မည်: Enver Timurbog Manager ကိုဖုန်းတင်ဒါမှ:7/ 02722137621 လေလံ Manager ကိုဖက်စ်: 4309 Ilan နေ့စွဲ: 02722141943 19.11.2012: 00: 00 လေလံနေ့စွဲ: 00 11.12.2012: 00: 00-00 / 14 သတ်မှတ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်: တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှုန်း 30: နုအကြောင်းအရာမှဖွင့်လှစ်နူးညံ့: ကုန်စည်ဒိုင်ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: 100 / 2012 မေးလ်: Spring Gripperlines ဝယ်ယူ tcddihalekomisyonuafyon@tcdd.gov.t TCDD ဖွစျလိမျ့မညျ 168883 ။ အဆိုပါဒေသတွင်းညွှန်ကြားမှု: ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ:7/ 2012 အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး: တစ်) လိပ်စာ: TCDD 168883 ။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Alicetinkaya Mah ။ GAR / AFYONKARAHİSARခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:70 272 213 76 210272 214 19- ဂ) အီလက်ထရောနစ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 300.000 အရေအတွက် Hm ရထားလမ်းစွဲစေသည့်စနစ်သင့်လျော်သောနွေဦးညှပ်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူရန် 06 / 12 / 2012 TC STATE ရထားလမ်းလေလံ 300.000 အရေအတွက် Hm ရထားလမ်းစွဲစေသည့်စနစ်သင့်လျော်သောနွေဦးညှပ်ဝယ်ယူ4အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းပစ္စည်းများတာဝန်ရှိညွှန်ကြားမှု-ဆာလောင်မွတ်သိပ်နူးညံ့-ထောက်ပံ့ရေးတင်ဒါ: Majid သားရေလေလံ Manager ကိုဖုန်းနံပါတ်: 346 221 70 00 / 4108 လေလံ Manager ကိုဖက်စ်: Ilan နေ့စွဲ: 07.12.2012 00: 00: 00 လေလံနေ့စွဲ: 17.12.2012 00: 00: 00-14: 00 သတ်မှတ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်: £ 100 တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း: အတင်ဒါအကြောင်းအရာမှဖွင့်လှစ်နူးညံ့: ကုန်စည်ဒိုင်ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: 2012 / 179711 မေးလ်: fikret@tcdd.net နူးညံ့အသိပေးစာ TYPE HM ရထားလမ်းစနစ်နွေဦးညှပ်ဝယ်ဖို့ချိတ်ဆက်မှုအတွက်သင့်လျော်ပါလိမ့်မည်။ Sivas xnumx.bölg TCDD ညွှန်ကြားမှု: ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ:4/ 2012 179711- အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး: တစ်) လိပ်စာ: Sivas xnumx.bölgခ၏ TCDD ညွှန်ကြားမှု) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: နွေဦးရာသီ Clamp Buy ပါလိမ့်မယ် 20 / 11 / 2014 နွေဦး Clamp TC တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေနွေဦးညှပ်အမှတ် 2000000 4734 အပိုဒ်အားဖြင့်ဝယ်ယူဘို့အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 19 အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 145857 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး 06280 GAR ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4129 - 3123115305 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ပစ္စည်း https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: @ tcdd.gov.t) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်သုံးဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း 2.000.000 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: နွေဦးရာသီ Clamp Buy ပါလိမ့်မယ် 25 / 05 / 2017 နွေဦး Clamp ယ်ယူရန်လိမ့်မည်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး STATE OF ရထားလမ်း Administration (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအမှတ် 2.000.000 4734 အပိုင်းအစနွေဦးညှပ်ဧည့်ခံပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 163861 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: စီးပွားရေး Anafartalar Mah ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်3ALTINDAĞ GAR / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4409 - 3123115305 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik malzeme@tcdd.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်နေသည် .gov / ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့် ...
ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံ Afyon TCDD, နွေဦး Clamp တစ်ဦးက Business ဝယ်ယူ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပမာဏနွေ Clamp ဝယ်ယူခြင်းကို 200.000
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: နွေဦးစုဆောင်းမှုအလုပ် Clamp
တင်ဒါ 3000000 HMI အမျိုးအစားနွေ Clamp အရေအတွက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သံနှုတ်မိန့်လိမ့်မည် Alna Clamping